पीसीआर रिपोर्ट बोकेर विदेश जाँदै हुनुहुन्छ? होसियार ! विमानस्थलबाटै फर्किनु पर्ला
आश्विन ०१, २०७७ २१:५७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । स्याङ्जाका जमान गुरुङ बिहीबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्नुभयो । ९ वर्षदेखि यूएई काम गर्दै आउनुभएका उहाँ गत फेब्रुअरीमा विदामा नेपाल आउनु भएको थियो । कोरोना महामारीका कारण काममा फिर्ता जान पाउनु भएन।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेपछि उहाँ काममा फर्किनका लागि विमानस्थल पुग्नुभएको थियो । एयर अरेबियाको जहाजबाट बिहीबार दिउँसो १:३० बजेको उडान थियो । उडानका लागि पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य थियो । जमान ढुक्क हुनुहुन्थ्यो, किनकी उहाँको हातमा पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट थियो ।
तर उहाँलाई एयर अरेबियाले आफ्नो जहाजमा लान मानेन । आफूले सूचीकृत गरेको प्रयोगशालाको रिपोर्ट नभएको भन्दै जमानलाई विमानस्थलबाटै एयर अरेबियाले फिर्ता पठाएको हो ।
जमानले लाजिम्पाटमा रहेको सूर्या हेल्थ केयर प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण गराउनुभएको थियो । एयर अरेबियाले स्टार र ह्याम्स अस्पतालको पीसीआर रिपोर्ट मात्रै मान्य हुने बताउँदै आफूलाई फिर्ता पठाएको जमानले बताउनुभयो।
एयर अरेबियाले आफ्नो एयरमार्फत उडान गर्नका लागि स्टार र ह्याम्स अस्पतालमै पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने नियम तोकेको थियो। त्यसबाहेक अन्यमा गरेको परीक्षण मान्य नहुने भनेपछि टिकट काट्ने बेलामा स्पष्ट जानकारी दिनैपर्ने हुन्छ । तर त्यतिबेला परीक्षण रिपोर्टबारे केही नभनिएको खुरुक्क पैसा लिएर टिकट काटिएको पीडित गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
‘टिकट काट्ने बेला एयरलाइन्सले केही पनि भनेन, सोही बेला जानकारी गराएको भए म उनीहरुले भनेकै प्रयोगशालामै पीसीआर परीक्षण गर्थेँ’ गुरुङले भन्नुभयो–‘तर अन्तिम समयमा विमानस्थलबाट फर्किनु पर्‍यो।’ विमानस्थलबाट फर्काइएपछि गुरुङ टिकट काटेको ठाउँमा आफ्नो समस्या सुनाउन पुग्नुभयो । तर ट्राभल एजेन्सीले एक दिन कुर्न भनेकाे छ तर एयरपोर्टमै रहेकाे एयर अरेबियाकाे कार्यालयले केही गर्न सकिँदैन भन्ने जवाफ दियो ।
गंगबुको च्वाइस ट्राभल्सले नारायणपहटी दरबारकाे उत्तरढोकामा रहेको लाइट ट्राभल्स एण्ड टुर्समार्फत एयर अरेबियाको टिकट काटिदिएको थियो । जमान गुरुङले टिकटबापत ३८ हजार तिर्नुभएको थियो ।
विमानस्थव प्रवक्ता देवचन्द्रलाल कर्णले सरकारले तोकेको जुनसुकै प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता दिइनु पर्ने बताउनुभयो। ‘हामीले भनिरहेका छौँ तर एयरलाइन्सहरुले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट पुग्ने प्रयोगशालाको मात्रै रिपोर्ट मान्ने भनिरहेका छन्’ नेपाल सरकारले तोकेका प्रयोगशालाहरुको रिपोर्टलाई मान्यता दिन पहल गरिरहेको कर्णले जानकारी दिनुभयो।
मित्रनगरस्थित एक गेस्ट हाउसमा बसिरहेका जमान अन्योलमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई यूइर्ए पुग्नुपर्ने छ । उहाँले फर्किनका लागि पुन एयर अरेबियाले तोकेकै ठाउँमा परीसीआर गर्नु पर्ने भएको छ र उता टिकट काटेको पैसा उसै खर्च भएको छ ।
अब अर्काे दिन जानका लागि अर्कै टिकट काट्नु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ । ‘म त साह्रै अन्यायमा परेँ कहाँ गएर कसलाई भनेर न्याय पाइन्छ ? हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैन’ गुरुङ दुखेसो पोख्नुहुन्छ।
भेरी अस्पतालमा ३ घण्टामा तीन जना संक्रमितको मृत्यु